बिचराʼ ! दाइजोका कारण ७० बर्षे बृद्धसंग बिबाह गर्न बाʼध्य २० बर्षे युवती – Gorkhali Dainik
बिचराʼ ! दाइजोका कारण ७० बर्षे बृद्धसंग बिबाह गर्न बाʼध्य २० बर्षे युवती
March 19, 2021 443
आमा दिनरात रु*दै हि*ड्नु हुन्थ्यो जसोतसो ६०, ७० हजार रिन काडेर आफ्नो उपचार गराएको सम्झिदा अझै आँसु झर्ने बताइन । आफू चौधरी भएकाले बिबाह गर्दा धेरै दाइजो खोज्ने र आफुसङ दाइजो दिनलाई केही नभएपछी आफुसंग उमेर मिल्ने केटोसङ बिहे गर्ने त सपना मात्र भएको सम्झेर बाध्य*ताले वृद्धसंग बिहे गरेको बताइन । उता वृद्धकि पनि जेठी श्रीमतीको मु*टुको रो’गका कारणले नि’धन भएपछी एक्ला बनेका वृद्धलाई साहराको खाचो थियो । दुबैजना दुख पाएका भएकै कारण बिबाह गर्नुपरेको उनिहरुले बताए ।
Prevभारतको दिल्लिमा नेपाली महिलाको गो*लि हानी ह *त्या,(भिडियो रिपोर्ट )
Nextल सबैलाई बधाई छ आज आउने APF को रिजल्ट को लागी कसरी हेर्ने त रिजल्ट यो लिंक क्लिक गर्नुहोला Website राख्देको छु।
छिमेकीको १३ बर्षीय छोरालाई बाँधेर बला’त्कार गर्ने महिला प’क्राउ
बबई गाउँपालिका लकडाउन